The n'ezie ndi! - Nri kọọchị 100 afọ - Ezi Stuff Factory
Home / Obere ocha / The ezigbo ndi! - Akwụkwọ mkpọchi afọ 100
The n'ezie ndi! - Akwụkwọ mkpọchi afọ 100
N'oge na-adịbeghị anya, anyị enweela ike ịsacha ụlọ nkwakọba ihe nke ụlọ anyị na-ere ahịa Torenven. Ndị 'ọbịa' gwara anyị na kọbọd a sitere na cafer ọzọ Lier ebe a na-agbanwebeghị n'ime ya kemgbe Agha I.wa Mbụ. Yabụ na anyị nwere ike iji mpako kwuo na anyị nwere otu narị afọ na ire. Ezigbo ejiri aka mee kristal siri ike na patina mara mma. Njikere ị nwere ịhụ agadi a n'anya?
ỤBỌRỤ: (gụnyere VAT na mpaghara)
Gbọ njem ga-ekwe omume na € 1 / KM njem njem site na ụlọ nkwakọba ihe anyị na Emblem (PC 2520)
Atiya: Obere ocha Tag: igbe iko